Ashampoo Photo Commander 11.0.5 Full Version ~ လမင်းတရာ
IN Photo and Media Editor Tools - ON 11:47 AM No comments
Ashampoo Photo Commander 11.0.5 | 158.1 MB
ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာ Photoshop လိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Software တစ်
ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး.. ရိုးရှင်းတဲ့အသွင်ပြင်ရှိပြီး အစွမ်းထက်အသုံးဝင်တဲ့ Tool များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံသမားများ..Animation .. Photo Editing သမားများအကြိုက်
တွေ့စေမယ့် Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Among other features there is the new dual-view modefor the comparison of an original picture and that picture while editing. Additionally, the optimization tools and video functions were improved, new effects were added and lots more. When handling your digital pictures you’ll never want to do without Ashampoo Photo Commander 10 again.
Home Page – http://www.ashampoo.com/